NENWELL yakavambwa muna 2007. Nemakore ekushanda nesimba nekuedza, Isu takagadzira zvino senyanzvi, mugadziri akavimbika uye mutengesi wezvigadzirwa zvefiriji zvekutengesa zvakadai seshowcase yakatwasuka, keke showcase, ice cream showcase, chest freezer, mini bar firiji nezvimwewo. .Vatengi vanogona kusarudza kubva pachigadzirwa chedu, kana isu tinokwanisa kugadzira zvinoenderana nemagadzirirwo nezvinodiwa nevatengi. Tine timu yehunyanzvi mainjiniya nevashandi vane makore gumi eruzivo mukugadzira nekugadzira. Isu tinewo yakasimba yemhando yekudzora system yekuona kuti chidimbu chega chega chezvigadzirwa zvedu chinogona kusangana nemhando yezvinodiwa kubva kune vatengi. Zvakare isu tinopa yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi kugutsa vatengi vedu kana vaine chero mubvunzo kana dambudziko. Isu tiri kutarisa pakuyedzwa kwemhando, zvinhu zvekugadzirisa uye kupa mutsva mutengesi / fekitori masosi muChina iwe nekambani yako. Mushoko, tinogona kubata iyo yese yekutumira sevhisi kune vatengi vedu. Kambani yedu ine chinangwa chekupa mushandirapamwe wedu neiyo yakanyanya optimized sevhisi iyo inoumba chigadzirwa, mhando, mutengo uye sevhisi. Kubva pane "Yakatarisana nevanhu, inopa basa rakakosha", iyo yekutanga mashandiro epfungwa uye inotsigirwa-inotsigirwa, inotsamira & yakagadzikana yenguva refu yakagadzikana hukama hwekubatana, pamwe neinongogara innovation sevhisi sevhisi, isu tinopa zvakanyanya kukosha sevhisi kumusika uye nzanga. Kuburikidza nekuenderera mberi nekuedza uye nekuita kwevashandi vese, ikozvino isu tine seti yemaitiro ebasa akasimba uye sisitimu yebasa kuti tipe sevhisi iri nani kune vatinoshanda navo pamwe nevatengi.
Complete chigadzirwa mutsetse uye yakavimbika unhu
Advanced kugadzira zvivakwa
Professional QC timu
Tsigiro yehunyanzvi uye zvikamu zvakasara zvinopihwa
Kutarisa kune ruzivo uye nekukurumidza sevhisi
firiji zvigadzirwa accessories
·Kutora chikamu mumhando dzakasiyana dzezviratidziro zvehunyanzvi zvepasirese gore rega rega. Izvi zvinotiita kuti tive nyanzvi uye nehanya pamusika maitiro. ·Ipa uye kurudzira vatengi mamwe ruzivo rwemusika uye kugadzirwa kwezvinhu. ·Iva nekwaniso yekugadzira zvigadzirwa zvitsva nevatengi kana kuzvigadzira wakazvimirira. ·Kuziva mafekitori ekunze uye epamba uye zvekutengesa zvinhu.. ·Kushanda nevagadziri vakasiyana-siyana kwemakore anopfuura makumi maviri. ·Kugona kuverengera mutengo kwakaringana. Ramba uchiziva nezvekuchinja kwezvinhu pamusika. Tonga yakanakisa nguva yekutenga Batsira vatengi kuchengetedza mari.
basa riri nani
Kuburikidza nekuenderera mberi nekuedza uye nekuita kwevashandi vese, ikozvino isu tine seti yemaitiro asina kusimba ekushanda uye sisitimu yekushanda yekupa sevhisi iri nani kune vatinoshanda navo pamwe nevatengi.
Iva nehupamhi hwekuona kwepasirese uye inonzwisisika yemusika pfungwa, inogona kugadzira zvigadzirwa zvitsva kana zvakagadziridzwa nevatengi. Kuve pamberi pemusika, kuhwina yakawanda musika mugove uye purofiti nevatengi pamwe chete. Yaigara ichipa mazano anoshanda ekusimudzira musika kune vatengi vakasiyana, vatengi vakarimwa ruzivo rwezvigadzirwa zvefiriji, zvichibatsira vatengi kutora chikamu chemusika!
Yakanakisa ruzivo rwebasa uye basa reboka rehunyanzvi kupa mhinduro yakanakisa kune vatengi.Inogona kupa yakanakisa gungwa nemhepo yekutakura chiyero, chirongwa chekutumira uye kutenga mutengo zano. Mhinduro inokurumidza:Kurumidza kupindura pamibvunzo yese panguva yekugadzira odha. Pakarepo uye nyanzvi mhinduro pamhando nyaya!
Nenwell vane inyanzvi yemhando yekudzora timu. Zvakanaka tarisa pane yega yega kugadzirwa. Isu tichaita mushumo wekuongorora kune vatengi mushure mekugadzirwa. Pakarepo uye nyanzvi mhinduro pamhando nyaya! Inogona kuva mumiriri wevatengi vemhiri kwemakungwa.Kubatana nefekitari kukudziridza chigadzirwa nekuvandudzwa kwemhando.
Mumakore gumi apfuura, Foshan Nenwell Trading Co., Ltd. yakabudirira kumisa bhizinesi remhando yepamusoro, uye kuwana hunyanzvi hwekupa masevhisi enguva refu kune vatengi vedu. Kuti titsvage nzvimbo nyowani dzekukura kuti dziwedzere kuwedzera chikamu chemusika, kambani yedu yave kuongorora misika yekunze, nguva pfupi yadarika yakabudirira kuvaka mapazi muKenya, East Africa, ine chinangwa chekupa zvigadzirwa zvakanakisa nemitengo inokwikwidza kune vatengi veko. .